Kava wepụ - J & S Botanics
[Latin aha] Piper methyicium L.
[Nkọwapụta] Kavalactones ≥ 30,0%
[Ọdịdị] Yellow powder
Osisi Part Ji: Root
[Net ibu] 25kgs / drum
[Gịnị bụ Kava?]
Kava, makwaara dị ka piper methysticum, kava kava, na 'awa, bụ a obere shrub nwaafo ka agwaetiti na South Pacific. The mgbọrọgwụ na ị ga-mere n'ime a na-abụghị ndị aṅụrụma, na-emetụta uche onunu nke e ji mee n'obodo na omenala ruo ọtụtụ narị afọ na Hawaii, Fiji, na Tonga.
Kava bụ omenala kwadebere site ịtụkwasị n'ala mgbọrọgwụ na esiwe na n'ime a porous nchupu, submerging na mmiri, na-apịpụta ihe ọṅụṅụ n'ime a nnukwu, pịrị, osisi nnukwu efere. Aki oyibo ọkara shei iko na-tinye na jupụtara - ntụmadị nnukwu efere style. Mgbe na-aṅụ a cup ma ọ bụ abụọ a mmetụta nke na-agụsi anya jikọtara na ntụrụndụ na-amalite na-abịa na. Ọ bụ ezie na ọ bụ obi, ọ bụ n'adịghị mmanya na na echiche ịnọgide doro anya. The flavor bụ n'ụzọ dị ukwuu ndị ezigbo mmadụ, ma ụfọdụ na-achọpụta na ọ na-ewe na-eji na-; ya n'ezie na-adabere na mmasị gị maka earthy flavors.
[Kava bụ Safe Jiri]
The enem irè uru nke kava ibelata mgbaàmà nke nchegbu na-na-akwado na a meta-analysis, a Ịhazi mgbakọ na mwepụ nyochaa nke asaa ụmụ mmadụ na-adakarị ọnwụnwa bipụtara na 2000 na Journal of Clinical Psychopharmacology, na ọzọ a yiri oké egwu review ke 2001. The reviews ahụghị ịrịba oghom mmetụta metụtara imeju toxicity.
Ná mmechi, imeju na-emetụta ọtụtụ bekee, tinyere ọgwụ na nke abụghị ọgwụ ọgwụ ọjọọ, dị ka nke ọma dị ka mmanya, nke bụ ihe kacha eme nke imeju mebiri. Anyị ga-maara na herbs bụ nke nwere ike ọgwụ, na-emeso ya na ihe kwesịrị ekwesị ùgwù banyere nwere mmekọrịta na toxicity, gụnyere imeju. N'aka nke ọzọ, Kava kava si oke nke nchekwa karịrị na nke ọ bụ na-emepụta ọgwụ Ẹkot.
Kava si nwere ike inyere dechapụ a ọnụ ọgụgụ nke nsogbu, ọtụtụ Ichi nchekasị, nchegbu, na akwusila ụra nakawa etu esi. Otú ọ dị, kava si anxiolytic (mgbochi egwu ma ọ bụ mgbochi nchegbu gị n'ụlọnga) na calming Njirimara nwere ike dechapụ ọtụtụ ndị ọzọ na nrụgide na nchegbu metụtara ọrịa.
1. Kava ka a Agwọ maka Nchegbu
2. Kava Ka usọbọ menopausal Ọnọdụ Uche swings
3. arọ Loss
4. ọgụ nká
5. Kwụsị Ise Siga Aid
6. ọgụ mgbu dị ka ihe analgesic
7. ehighị ụra nke ọma
Osote: Marigold wepụ
Kava ntụ ntụ
Dandelion mgbọrọgwụ wepụ
White Willow Bark wepụ